Fariintii qiirada lahayd ee uu Garoomada ku Sagootiyey Ronaldinho? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(18-1-2018) Xiddigii hore ee xulka qaranka Brazil iyo kooxaha Barcelona, PSG iyo AC Milan ee Ronaldinho ayaa farriin qiiro leh ku maca-salaameeyey garoomada, taas oo uu ku sheegay inuu si rasmi ah uga baxay kubadda cagta.
Ronaldinho oo ahaa ciyaartoygii ugu horreeyey ee xirfaddiisa kubadda cagta sannadkii 2000 lagu baahiyey Youtube oo ay dadyow badan oo carruur ah kala socdeen iyo xirfadleyaal kale, ayaa waxa uu sheegay in uu gebi ahaanba ka fadhiistay xirfadda kubadda cagta oo inkasta oo aanu muddo sannad ku dhow ciyaarin haddana aanu shaacinin inuu ka fadhiistay.
Ronaldinho: Habeen Uu Sikhraamay Ayuu Burburiyey Rajadiisii Maraykanka
Ronaldinho muuqaalkiisii ugu horreeyey ee uu geliyey barta YouTube, waxa la daawaday in ka badan 1,000,000 (hal milyan oo jeer), kaas oo ay qayb ka ahayd shirkadda NIKE oo xayeysiis ahaa. Waxa uu muuqaalkaas saddex jeer oo is xigta uu kubbadd ka dhalinayaa halka ay labada birood iska galaan oo ah goobo yar.
Wakhtigii 20-ka sannadood ka badnayd ee uu garoomada ku jiray, waxa lagu xasuusanayaa ciyaartiisii quruxda badnayd ee uu kusoo bandhigi jiray garoomada, gaar ahaan waayadiisii Barcelona oo ahaa xilligii uu ugu fiicnaa iyo PSG oo sida hillaaca uu uga soo dhex mudhay.
Xulka qaranka Brazil, ayaa xushmad iyo xasuus gaar ah u haya, waxa uu ahaa laf-dhabartii ka dambaysay in Koobkii adduunka ee 2002 uu waddankaasi markiisii 5aad hantiyo.
Hadda oo uu ciyaaraha ka baxay iyadoo ay da’diisu tahay 37 jir, hase yeeshee, waxa hubaal ah in sannado badan maskaxda dadka ay kasii guuxi doonto ciyaartiisii mucjisada ahayd.
He was the face of Nike’s Joga Bonito campaign, and his videos are viewed around the world
Inta la ogyahay, muuqaallada la daawado, Ronaldinho waa qofka koowaad. Muuqaalka shirkadda Nike soo saartay ee Joga Bonito oo Ronaldinho oo carruur ah, waxa laga daawaday dunida oo dhan. Waxay dadka daawaday kor u dhaafeen 12 milyan oo qof oo dunida oo dhan ah.
Garoomada Tababarka iyo ciyaaraha caadiga ahba, qofka daawada waxa uu ku tilmaami jiray Sixirroole. Ereyga Sixirroole, waxa la maqli jiray mar kasta oo uu garoonka ku jiro, waxaana adeegsan jiray telefishannada.
Inyar kaddib markii uu soo baxay go’aanka uu kaga fadhiistay ciyaaruhu, waxa sida daadka usoo burqaday farriimo dunida oo dhan ka imanayey oo lagu maca-salaamaynayey.
Waxa uu ku guuleystay Koob Adduun, Champions League, LaLiga, Copa del Rey, Serie A iyo wax kasta oo uu ciyaartoy ku guuleysan lahaa.
Da’yarta wakhtigan, waxay maqlaan magacyada Diego Maradona, Pele iyo Johan Cruyff. Waxay arkaan muuqaallo gaagaaban oo xiddigahaas hore ah waxaase kaga xoog badan odhaahda maqalka ee ay dadka waaweyn kasoo xigtaan. Laakiin Ronaldinho wuu ka duwan yahay. Waxa uu ka buuxaa YouTube-ka oo muuqaallo cajiib ah oo farsamadiisii ay kala soconayaan.